माेदीसमेत पुगेकाे अनुष्का-विराट बिहेको रिसेप्सन पार्टीमा कति खर्च ? « Naya Page
माेदीसमेत पुगेकाे अनुष्का-विराट बिहेको रिसेप्सन पार्टीमा कति खर्च ?
काठमाडौं (एजेन्सी) : भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली र नायिका अनुष्का शर्माको रिसेप्शन आयोजना दिल्लीको पांच तारे होटलमा गरियो । उक्त रिसेप्सन पार्टीमा केहि यस्तो महान व्यक्तिहरू पनि आए । विराट र अनुष्काको रिसेप्शन पार्टीमा भारतको प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीलाई पनि आए । प्रधानमन्त्री मोदी उनीहरुको रिसेप्शन पार्टीमा पुगी शुभकामना दिए।
होटल ताज डिप्लोमेटिकको दरबार हलमा भएको यस रिसेप्सनमा कति खर्च भयो होला भनेर धेरैमा चासो हुन सक्छ । उक्त पार्टीमा विराट–अनुष्काले करिब एक करोड खर्च गरे । उनीहरुको खर्चको विल करिब भारु ५० लाख आएको छ ।
अब मुम्बईमा पनि यस्तै रिसेप्सन पार्टी चल्दैछ । त्यहाँ बलिउड सेलिब्रेटीदेखि किक्रेटरहरुको जमघट हुनेछ । खबरहरुमा जनाइए अनुसार मुम्बईको पार्टी राती ३ बजेसम्म चल्नेछ । ४० तला अग्लो होटल सेन्ट रेजिसको नवौं तलामा उक्त पार्टी आयोजना हुनेछ ।
त्यहाँको एस्टर बालरुममा रिसेप्सन पार्टी चल्नेछ । यहाँको रिसेप्सन पार्टीका लागि अनुष्का विराटले ६ सय जना पाहुनालाई बोलाएका छन् । यसमा धेरैजसो बि टाउन सेलिब्रेटी र क्रिकेटर छन् । त्यहाँ हुने पार्टीमा पाहुनाका लागि मल्टी डिशेज बुफे राखिएको छ । यसका साथै मदिराको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, यहाँ दिल्लीको तुलनामा कम खर्च हुनेछ । रिसेप्सन पार्टीमा करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।